यी ३ याेगमा जन्मिएका मानिसलाई धन, वृद्धि र लक्ष्मीको कृपा सधै रहन्छ – live 60media
निसले जीवनकाे हरेक पाइला पाइलामा संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् । कुनै मानिसहरु यस्ताे ग्रहयाेगमा जन्मिएका हुन्छन उनीहरुको जीवनमा सम्पूर्ण सुख- सुबिधासहितको आरामदायीक राजर्षी जीवन बिताइरहेका हुन्छन् ।
← आज जन्मदिन मनाउने ४ चर्चित अनुहार : ह्याप्पी बर्थ डे-सिताराम, प्रियाना, सुगम र उपासना
महान बुहारी – बूढा ससुरा यस्तो हुदा पनि साथ छो’डिनन, परिवारले छोड्यो तर बुहारीले यसरि स्याहार्दै, २४ सै घण्टा बिस्तारामै दि’सापि’साब(भिडियो) →
शरीरको यी भागमा रुद्राक्ष लगाउँदा पूरा हुन्छन् सम्पूर्ण मनोकामना ! कहाँ लगाउने? हेर्नुहोस् !
घरमा ‘मनीप्लान्ट’ रोप्दा पैसा आर्जन हुन्छ ? वास्तुशास्त्रको तर्क यस्तो छ